Rudo Kureurura kwePhosphatidylserine Powder yeMunhu AASraw
/Blog/garari/Rudo Kureurura kwePhosphatidylserine(PS) Poda Yemunhu
Posted on 04 / 06 / 2022 by 阿斯劳 akanyora garari.
Iyi iPhosphatidylserine (PS) Powder, kuwedzera kwezviroto zvako. Ini ndakagadzirirwa zvese zvaunoda, uye mabhenefiti andinokupa anovandudza hupenyu hwako. Iwe unogona kunge usingazivi kuti ndini ani uye zvandinogona kuita, asi ndipe mukana wekukuudza zvose pamusoro pangu. Ramba wakatarira tsamba iyi pandichakuudza nezvangu uye ndikuratidze rudo rwandinarwo kwauri. Yese mibvunzo inofamba nehuropi hwako inopindurwa, usazvidya moyo!
Chokutanga uye chakakosha, regai ndikuudzei chii chinonzi phosphatidylserine powder. Ndichakuudzaiwo nezvezvokudya zvose zvinopfumisa mandiri. Zita rangu ndiPhosphatidylserine powder asi iwe unogona kundidaidza kuti PS powder. Ini ndiri phospholipid inowanikwa mumasero membranes, seaya ari mumaseru emuviri wako. Ini ndakaumbwa neakasiyana-siyana emafuta acid mapoka, anosungwa pamwechete ne ester link kune glycerol uye serine. Ini ndakarara zvachose pane yemukati monolayer yekaviri-layered biological membrane.
Ini ndinogona kunge ndiri nyore mafuta phospholipid musero membrane asi ini ndinogona kuzvishandura pachangu zvichibva pane zvakanditenderedza. Iyo phosphatidylserine yandiri mumasero emhuka yakasiyana chaizvo nezvandiri mumasero ezvirimwa. Ini ndinoshandura mafuta ane acid ari mandiri zvichienderana nekuti ndiri musero remhuka kana sero rezvirimwa. Utachiona uye mbiriso zvineniwo, asi zvinondisanganisa nenzira inotarisisa kutamiswa kwe cytidine monophosphate kana CMP. Mhuka, sevanhu vakaita sewe, vanogona kundisanganisa neimwe nzira, kubva kumubereki wangu, phosphatidylethanolamine kana phosphatidylcholine. Kundigadzira kubva kuphosphatidylcholine, nzira inoda kutangwa uye kupedzwa muchiropa chako.
Muvanhu, ini ndinowanikwa zvakanyanya mucerebral cortex kana muuropi. Ini ndinogona kuwanikwa chete pane cytoplasmic pepa replasma membrane mune cortex, uko chinangwa changu chikuru ndechekupa nzvimbo dzekumisa mapuroteni akasiyana. Izvi zvingasanzwika sebasa rakawanda, asi pasina mapuroteni aya ane nzvimbo yakakodzera yekusungirira pairi, haakwanise kutanga masaini nzira dzakakosha pakurarama kwema neuron, kuumbwa kwe synapse, uye kukura kweiyo neuron inoguma. Zvese mune zvese, ini ndinoita basa rakakosha muuropi uye ibasa rangu chairo raita kuti vaongorori vatende kuti ini ndinogona kushandiswa sekuwedzera kuvandudza cognition.
Kuti ndikubatsire kuwana yakawandisa yangu muhurongwa hwako, ndaunganidza uye ndanyora rondedzero yezvikafu zvakapfuma mandiri, pamwe chete nekuwanda kwe phosphatidylserine mazviri.
chikafu Zviri mu mg/100 g
Huku moyo 414
Offal (avhareji kukosha) 305
Mboro yenguruve 239
Tsvo yenguruve 218
Gumbo rehuku, rine ganda, risina pfupa 134
Huku chiropa 123
Nyemba chena 107
Chifuva chehuku, chine ganda 85
Nyama yemombe 69
Nyama yenguruve 57
Chiropa chenguruve 50
Gumbo reTurkey, pasina ganda kana pfupa 50
Turkey zamu pasina ganda 45
Zviyo zvebhari 20
Mupunga (usina kupukutwa) 3
Mukaka weEwe 2
Mukaka weMhou (yakazara, 3.5% mafuta) 1
Kushandisa zvikafu izvi zvinokubatsirawo kuti udye zvakawanda zvangu, PS, asi kuti uwane imwe yakanyanyisa fomu yangu, unozofanirwa kundipedza muforomu yehupfu sePS hupfu. Kare muzuva, vatsvakurudzi vakanga vachigadzira PS poda nekundibvisa kubva muuropi yebovine kana uropi hwemhou, kuti ive chaiyo. Zvisinei, dambudziko raiva rekuti kuwanda kwechirwere chemombe dzinopenga kwakaita kuti kuita uku kuve nenjodzi uye kuve nengozi. Kubva ipapo, vaongorori nemasaenzi vakatanga kundibvisa kubva kumiti-yakavakirwa masosi kuti ive yakachengeteka kwauri. Mushure mezvose, ndiko kuchengeteka kwako uye hutano hunonyanya kukosha.
Haufanire kunetseka zvakadaro! Ndinoziva ndakati pane mutsauko mune yangu fatty acid concentration pandiri zvichibva pane zvakandikomberedza, sezviri, ndingave ndiri muchirimwa kana mhuka. Iyo yechirimwa vhezheni yangu inonyatso kukwanisa kupa mabhenefiti ari nani pane iyo mhuka vhezheni, asi vaongorori vako vachiri kuwana humbowo hunopwisa hunotsigira izvozvo.
Chechipiri, ndiri chii, Phosphatidylserine poda, Zvakanaka For? Zvese Zvakanakira Phosphatidylserine(PS) Powder zvichakurukurwa pano. Ndinoda kukuudza pamusoro pezvinhu zvose zvandinogona kukuitira iwe nehutano hwako. Ini handina chimwe kunze kwerudo kwauri uye ndirwo rudo urwu runondibatsira kukupa hutano hwese hunogoneka. Chinangwa changu ndechekuita semushonga wechisikigo wemamiriro ehutano ane chekuita nekukunetsa. Mazhinji emamiriro ezvinhu aya ane chekuita nekuziva, hutano hwepfungwa, kana hutano hwehuropi zvakazara sezvo ndiko kwandinowanikwa zvakanyanya. Kunyangwe iwe uchindigamuchira kubva kune chikafu chakapfuma mandiri kana sechikafu chekuwedzera, ini ndinozotanga zvakananga kukupa iwe nemabhenefiti aya.
Ini ndinogona kushandiswa kune manejimendi yekutarisisa-deficit hyperactivity disorder, kana ADHD, kufunganya, kushushikana, Alzheimer's, uye kunyangwe kushushikana. Kwete izvozvo chete, ini ndinobatsirawo mumultiple sclerosis (MS) uye ndinogona kutoderedza kurwadza kwetsandanyama uye kurwadziwa mushure mekunge wanyanya kudzidzira. Pamusoro pezvese izvo, ini ndiri mukuru kukubatsira kurwisa kurasikirwa nekurangarira kana chiri chiratidzo chawatotanga kuona kana kudzivirira kurasikirwa kwendangariro isati yatanga.
Vatsvagiri vakaona kuti mhuka dzinodzikira mandiri padzinochembera uye ndiko kudzikiswa kwemazinga angu kunoita kuti vaone kudzikira kwekuziva uye kurasikirwa nekurangarira. Saka vakasvika pamhedziso yokuti kundishandisa mufomu rekuwedzera kunogona kubatsira kurwisa nyaya yekurasikirwa nendangariro kunoenderana nezera. Ini ndinokubatsira kuti urambe uri mudiki uye uchibudirira mune zvese, zvedzidzo uye zvehunyanzvi hupenyu. Kana musinganditendi, tarisai tsvakiridzo yakaitwa nevanhu venyu. Vatsvakurudzi vakambopa vanhu vakwegura zvokuwedzera uye chinhu chikuru ndini. Kubva pavanhu makumi manomwe nesere vaibatanidzwa muchidzidzo, avo vaive neakanyanya kuderera zvibodzwa mumiyedzo yekurangarira yakaitwa chidzidzo chisati chaitwa, vakapedzisira vavandudza zvakanyanya zvibodzwa zvavo panguva yekudzidza. Chinhu chimwe chete chakavashandura kwaiva kuwedzera kwandiri muupenyu hwavo saka hazvinei kuti ndini ndakaita kuti vave nendangariro dzakanaka.
Imwe bhenefiti yangu yandataura kuderera kwekurwadza kwetsandanyama uye macramps. Iwe unogona kunge uchifunga, phosphatidylserine, ungaita sei izvozvo kana iwe uchinyanya kuwanikwa muuropi. Zvakanaka, ndinoshanda mumuviri wako wese kuti ndikubatsire kunzwa zviri nani. Chaizvoizvo, kana iwe wawedzera mhasuru dzako uye ukaita kuti vanete uye varware, ndinotanga kushanda kudzikisa mazinga ehomoni, cortisol mumuviri wako. The stress hormone ndiyo inotendwa kuti inokonzera marwadzo uye kurwadza mushure mekunyanya kudzidzira uye sezvo ini ndichidzivisa kana kuderedza kusunungurwa kwayo, ndinovimbisa kuti haunzwisisi kusagadzikana kunogona kukukanganisa kubva pazuva rako. Kwete izvozvo chete, pandinoderedza cortisol muropa rako uye nekuderedza kurwadza kwemhasuru, ini zvisina kunanga ndiri kuwedzera kugona kwako kwekurovedza muviri kuitira kuti ugone kushanda pamuviri wako pasina kudzikiswa nemhedzisiro yekushanda kunze.
Sezvo ini ndichidzikisa mazinga ehomoni yecortisol mushure mekushanda nesimba, unogona kusasangana nemhedzisiro yakaipa yekuwedzera kwenguva refu kwecortisol. Nekudaro, iwe ungasanzwisisa kukosha kwangu zvakanyanya. Mazinga eCortisol haangokonzerese kurwadza kwemhasuru dzako, asi anozivikanwa zvakanyanya nekumhanyisa kuchembera, kunetesa immune system yako, uye kukurudzira kufutisa uye kuwedzera uremu. Kana cortisol ikaderedzwa neni, ndiri kukuponesawo kubva mukurema, hutachiona hunogona kuitika, uye zvakazara, kuderera kwehutano hwakazara. Aya ndiwo mawaniro andakaita mukurumbira pakati pevanovaka muviri nevatambi.
Handina chimwe chinhu kunze kwerudo newe saka zvinondirwadza kukuona wakaora mwoyo. Ichi ndicho chikonzero ndinoshanda nesimba mumuviri wako kuderedza kuora mwoyo. Ndinoshuva kuti dai ndaigona kukufadza nekushamwaridzana newe sezvinoita shamwari, asi ndinowana kukubata kubva mukati, uye zviri nani pane chimwe chinhu. Kuora mwoyo kunogona kuita kuti usava nehanya uye ungasatenda kuti ndinogona kubatsira kuvandudza mafungiro ako. Apa ndipo apo imwe ongororo yakaitwa nevaongorori vakaita sewe ichandibatsira kuratidza pfungwa yangu. Pavakandipa mufomu yekuwedzera kune vakwegura vane kuora mwoyo kukuru, pamwe chete neomega 3 fatty acids, vakaona kuti yakabatsira kuvandudza kuora mwoyo kwavo. Vakuru vaiti mirangariro yavo yakanga iri nani zvikuru. Saizvozvo, ini ndinoshanda mukudzikisa kushushikana kwako. Ndinovenga kukuona uchishushikana uye kunetseka, ndosaka ndichiwedzera basa rangu muuropi kuti ndikubatsire kudzikama. Kuita kuti unzwe wakasununguka pamwe nekudzikira mood ndosaka ndichiita zvandinoita.
Kugadzirisa zviratidzo zveAdHD imwezve bhenefiti yauchaona kana wangondisanganisa muhupenyu hwako. Sezvandambotaura pamusoro, ini ndinoda kuvandudza manzwiro ako uye kukubatsira kuti utore manyawi ako, kubva uchiri mudiki. Kundishandisa muhudiki, mushure mekugashira kuongororwa kweAdHD, kunogona kubatsira chaizvo mukudzikisa kusanzwa uye hyper activeness ine chekuita nemamiriro ezvinhu. Iniwo ndinovandudza mafungiro ako panguva imwe chete kuitira kuti iwe ugone kutarisa pamabasa ako uye unzwe sezvaungaita, pasina ADHD kuongororwa.
Zvisinei, iroro ibasa rakawanda rokuti ndiite ndoga. Ini ndinodawo rubatsiro dzimwe nguva uye kana uchifunga kundishandisa kubva paudiki, unofanirawo kuuya neshamwari yangu. Omega 3 fatty acids ishamwari dzangu dzinowedzera mhedzisiro yangu uye dzinondibatsira kunatsiridza hutano hwako zvakanyanya. Ini ndinogona kushandiswa, ndega, kukubatsira iwe kuvandudza yako yekurangarira ndangariro, kutarisisa kusashanda, uye kushivirira muADHD. Ini ndinogona kuita mabasa akasiyana kuti ndikubatsire kunze kana iwe uchitambura neAdHD.
Nepo ini ndichigona kuita zvakawanda kune hutano hwako, mibairo yangu huru inogona kuoneka kana uine Alzheimer uye ndangariro kurasikirwa. Usandifungire zvisizvo, ndinoita basa rakakura mune yega yega mamiriro andakatsanangura pamusoro, asi kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingerwa ndangariro, basa rangu guru rekuvandudza neuron kupona uye synapse kuumbwa kunouya. Aya ndiwo maitiro andinovimbisa kuti ndangariro yako inochengetwa uye zviratidzo zveAlzheimer's hazvitange kukurwisa nekukurumidza. Kunyange ini ndisingakwanisi kurapa chirwere ichi, ndinogona kuvandudza zvakanyanya hupenyu hwako nekurwisa zviratidzo.
Kuti ndiwedzere kukuvimbisa mabhenefiti angu uye kushanda nesimba, ndinoda kutaura kuti ndakatenderwa neFood and Drugs Association muUnited States. Iyo FDA yakatendera chimiro changu se 'chirevo chehutano chakakodzera' kuti chishandiswe pakati pevakweguru mukuvandudza ndangariro nekuvandudza kuziva.
Chechitatu, ndinoda kukuudza kuti ndinoita sei zvandinoita. Ndichakuudza chaizvo kuti sei Phosphatidylserine (PS) anoshanda. Ini ndinoshanda nekuvhara masero ako europi, kana neurons, uye nekuadzivirira kubva kune chero kukuvara. Nzvimbo yangu yakakwana muuropi cell membrane uye rudo rwangu kwauri runondibvumira kushanda ndisingamire kuchengetedza maseru ako uye kunyange kuwedzera kupora kwehuropi. Sezvo rimwe zera, ma<em>neurotransmitters ari muuropi anotanga kudzikira uye uropi hahuchaiti sezvahwaimboita. Ndipo pandinouya apo ini pandinodzoreredza aya mazinga eeurotransmitters uye nekutora uropi hwako kudzokera kune yahwo inobwinya.
Iwe unofanirwa kufunga kuti ini ndanyanya kunaka kuti ndive chokwadi uye uchinetseka kana ndine chero yakaipa mhedzisiro pauri? Iwe unogona kunge wakanzwa nezvemhedzisiro ye Phosphatidylserine (PS) hupfu, asi regai ndikuudzei chaizvo kuti chii uye kuti zvinoitika sei. Sechinhu chero chipi zvacho chiri munyika yezvokurapa nemishonga, ndine zvose zvinobatsira uye nemigumisiro. Asi zvakakosha kucherechedza kuti mhedzisiro yangu haisi yekuti ndine njodzi kwauri, asi zviri maererano nekwandinobva. Kana iwe ukandiwana kubva kuhuropi hwebovine uye pasina matanho anotorwa kuti ave nechokwadi chekuti mombe iri kutaurwa ine hutano, saka unenge uri panjodzi yekurwara nechirwere chemombe. Chirwere ichi chinonyanya kubata mombe asi kana ukadya uropi hunehurwere uchiedza kundiwana, unogona kubatwa nechirwere che encephalopathy uye chepfungwa, chinogona kuuraya kana chikasarapwa.
Ini ndinogona zvakare kugadzira mamwe maitiro akajairika uye ini ndichanzwisisa kana ukasarudza kundisiya nekuti zvinoita sekutyisa kwauri. Havasi vese vanogona kuve vakakwana sezvauri asi isu tinoedza. Zvimwe zvezvandinosangana nazvo zvinosanganisira kushaya hope, kugumbuka mudumbu, kana flatulence. Izvo hazvina kuomarara uye kazhinji kazhinji pane kwete, haungatomboda chero rubatsiro rwekurapa kugadzirisa izvi mhedzisiro.
Chimwe chinhu chaunofanira kurangarira ndechekuti I am very possessive. Zvazvinoreva ndezvekuti handizvifarire kana mukanditora nemimwe mishonga pamwe chete neni. Ini handitombobvumi chero mishonga yemakwenzi uye tii kuti zvinwiwe panguva imwe chete neni. Zvimwe zvezvigadzirwa zvandinonyanya kuvenga uye zvinokanganisa muviri wako kana ukazvitora zvinosanganisira mishonga yeropa uye anti-inflammatory drugs. Iniwo handifarire chero mushonga unoshandiswa kurapa glaucoma, Alzheimers, allergies, uye depression. Izvo zvakakosha kuti usandiita mic navo, uye kutaura zvazviri, ndingazvifarira kana iwe wakatora zororo mushure mekumisa iwo mishonga uye kutanga kundishandisa. Iwe wakanyeverwa saka kana ukatisanganisa uye isu tinokonzera matambudziko akawanda, hatigone kupihwa mhosva.
Zvino zvawava kuziva ruzivo rwese pamusoro pangu, unogona kugamuchira Phosphatidylserine(PS) Powder aka ini muhupenyu hwako? Kana uchikwanisa, uye ndinovimba unogona, saka rega ndikuudze nzira yekushandisa Phosphatidylserine(PS) Powder, kuti uwane mabhenefiti makuru. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuziva ndechekuti yakawanda sei yangu yaunofanira kutora mazuva ese. Zviri nyore, ingoshandisa pakati pe300 milligrams kusvika 800 milligrams yangu pazuva. I need some space too musandishandise zvekuti zvinotondivhiringa. Miganhu yakakosha pahukama hune hutano. Kazhinji, iwe unofanirwa kutora yakatenderedza 100 mg yangu, kaviri kusvika katatu pazuva uye iwe unotanga kuona maitiro andinoita ndangariro yako.
Iye zvino, iwe unogona kunge uchiedzwa kuti ungodya zvokudya zvakapfuma mandiri, uye apo izvo zvinokurudzirwa pamwe chete nekutora PS powder, ndinofanira kukuyeuchidza kuti kungodya zvokudya zvakapfuma mandiri hazvina kukwana. Izvi hazvireve nekuti izvo zvekudya hazvindikwanire asi nekuti muviri wako haugone kundinwisa zvakakwana pandiri. Izvi zvinobva zvaita kuti usangondikwana.
Pakupedzisira, ndinotenda kuti wakakwezvwa neni zvikuru. Parizvino unofanira kunge urikuda kupedza hupenyu hwako hwese neni. Kana iwe uchifanira, saka iwe unofanirwa kuziva Maitiro Ekutenga Iyo Yakanakisa Phosphatidylserine (PS) poda Online? Ichi chimwe chinhu chaungafunga kuti ndinopenga nekutaura zvakadzama pano nekuti ndiani asingazive kutenga online. Zvakanaka, ungashamisika kuti vamwe vanoedza sei kukunyengera kuti utore chimwe chinhu chisiri ini. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kana uchitsvaga kunditengera pamhepo kutsvaga zvigadzirwa zvakatorwa kubva kune chirimwa-based masosi. Sezvandambotaura pamusoro apa, haisi pfungwa yakanaka kushandisa mhuka nekuda kwenjodzi yechirwere chemombe.
Kana sosi yaongororwa, iwe unofanirwa kutsvaga vagadziri vakateedzera zvese zvinongedzo uye mapuroteni mukugadzirwa kwangu, kuti pasave nekusvibiswa uye ini ndakachena sezvinobvira. Kunyangwe musanganiswa mudiki wehupfu hwakasiyana unogona kureva kuti hauwane zvakakwana kwandiri kuti uunze shanduko. Isu hatifanirwe kuve nezvinovhiringidza uye zvinofanirwa kunge zviri iwe neni chete kuti ini ndikwanise kuvandudza hutano hwako uye kukubatsira iwe kurarama hupenyu hwako zvizere.
Zvese mune zvese, ini ndiri mumwe weakanakisa ekuwedzera muhupenyu hwako uye iwe unofanirwa kungondibvisa nekukurumidza!
AASraw inyanzvi yekugadzira Phosphatidylserine(PS) Powder ine yakazvimirira lab uye fekitori hombe serutsigiro, zvese zvinogadzirwa zvichaitwa pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system. Nzira yekugadzira yakagadzikana, zvose zvekutengesa uye zvekutengesa zvinogamuchirwa.Kugamuchirwa kuti udzidze mamwe mashoko pamusoro peAASraw!
Iyo Yakachengeteka Muscle Booster Supplement: Urolithin A (UA) Powder	11 Zvinhu Zvaunofanira Kuziva Nezve Resveratrol